Enough Is Enough Of Kulmiye Government. Wadankii Dhammaa Wax Yar Siisataye Waayahay. | Somaliland Today
← DAAWO: Sheekhul Baladka Hargaysa Aadan Siiro Oo Ka Hadlay Dadkii Lagu Laayay Magaalada Haawaday
Raysal Wasaaraha Dalka Ingiriiska Oo Ka Cadhootay Hadalkii Donald Trump Ee Weerarkii London →
Enough Is Enough Of Kulmiye Government. Wadankii Dhammaa Wax Yar Siisataye Waayahay.
Waxaa caddaan u muuqda in ummaddii reer Somaliland ay quus ka joogaan xukuumad Kulmiye oo dambe, waxaa sidaa wacay oo ay dadku yar iyo wayn garanayaan inay xaqiiqada ka fog yihiin cid kasta oo hogaaminaysa xisbiga Kulmiye. Haddaa waxa sameeyeen mid qudha ay ummadda horteeda ka sheegaan faaiidada ay ummaddu ka heshay wax uun baa laga dhegaysan karaa. Ka u horeeyaa waa hantidii ummadda ee dadka tirsan ku wareejiyeen maxaa faaiida ah oo ummaddu ka heshay oon dhaxal wareejin iyo dhac qaran aan ahayn soo qabo dhulkii danta guud iyo daarihii danta guud ee dadka aan lahayn lagu wareejiyey maxaa faaiido lags helay ha micneeyaan maanta dadka hortiisa,
waa xilli doorasho, waa marka qudha ee dadka madaxnimo doonka ahi shacabka ugu dhaw yihiine. Haamihii feedhku ka dhacay ee baarlamaanka lala barbar maray maxaa ummadda iyo dalkii lahaa faaiido maanta ka hayaa; ha ka hadlaan Muse Biixi iyo Silaanyo: Kulmiye labuu u qaybsamaa waa Dubbe iyo Masaamiir , su’aalahan shacabku waxay ku waajahan yihiin dubbayaasha waa Madaxweynaha iyo marwadiisa firfircoon ee iyadoon waddanka loo dooran lagu hayo xaqiiqada inay wadanka ka arimiso iyo Muse Biixi oo ah musharaxa madaxweyne ee Kulmiye isagu intaanuu kursiga ku fadhiisan waxaa laga rabaa jawaabo cadcad waxa uu ka qabo dhaxal wareejinta ummadu waxay wada lahayd. Waxaa ugu sii weyn Dekeddii oo wax yar carab laga siistay iyo xeebtii oo la iibiyey oo Dubai lagu kala qaatay qaddar yar oo lacaga. WADANKII DHAMMAA WAX YAR SIISATAYE WAA YAHAY KULMIYE.
Geedisocodkii xukuumadda Kulmiye wuu isku dhex daatay marakii madaxweynihii wax ku dhaceen oo uu mar qudha ka hadli kariwaayey xaaladaha adag ee wadanka soo waajahay oo ah Haamihii, Dekedii, dantii guud iyo abaarihii, iyo musuq maasaqii, qabyaaladdii iyo Sicir bararkii, wada hadaladii Somalia, la dagaalankii Baarlamaanka iyo kala iibsigoodii waxaa soo dhami waxa ka dhashay ( economic distortion) oo horteenna maanta yaalla. Dadka reer Somaliland mucaarad iyo muxaafad waa isku dan yaan si xun wax u sheeggu kala dan u tusin. Waxaa ina wada horyaala su’aalo. Su’aalaha wadani la weydiinayaa waqtigan kala guurka ah iyo kuwa Kulmiye la weydiinayaa way kala duwan yihiin. Yaanay iskaga kiin khaldamin shacabow. Su’aalaha kulmiye waxaa ugu waaweyn wixii wadanku lahaa ee wareejiseen maxaa faaiido laga hayaa. Wixii tobadiii sano khasaare soo kordhiseen ee lacagtan qiimo beeshay iyo malaayiintaa wax ku ii bi seen maxaa ka qsbateen oo buruuf haysaan. Todobo sano ayaa wadanka ka talinayseen Ictiraafkii ha ka waramo Madaxweynihii la doortay wuxuu ka soo qabtay hadduu wax kasta Madaxweyne Siilaanyo ku (fail) garoobay oo ay cadday Kulmiye waa ku dhacay horuumarintii wadanka. Hadday ku caddaato inuu guryo waaweyn ka iibsaday Dubai, London iyo Kenya wuu khiyaameeyey dhaqaalihii wadanka waxan oo dhami jawaabaha Kulmiye u gaarka ah weeye. Muse Su’aalaha u gaarka ahi waa wax danguuda oo ummadda iyo dalka ka haysataa ma jiraan waa ku celiyaa dalka iyo dadka iska leh haddii kale xaq uma laha in uu wadanka. Waxay noqonaysaa arin distoorka ka soo horjeedda iyo qaanuunka musharixiinta.